Ubuhle Obufihliwe Ogwini, eMatanchen Bay
I-Jardin Escondido iyipharadesi elifihliwe ngempela! Leli yikhaya lamaholide elinethezekile elinendawo enhle e-Playa Los Cocos, imizuzu emibili ngemoto ukuya edolobheni elincane lase-Atikama. I-Playa Los Cocos ingelinye lamabhishi anokuthula futhi ahlelekile endaweni, lapho uzovame ukukuthola unobhishi uwedwa. Ezinyangeni zasebusika lolu wulwandle oluhle lokuhamba ngezinyawo nokubhukuda, kanye nendawo enhle ongahlola kuyo. Sicela uqaphele ukuthi alukho njalo ulwandle olunesihlabathi ngaphambili, ngicela ubuze!
Leli yikhaya elinethezekile khona kanye kwelinye lamabhishi amahle kakhulu endaweni. Le ndawo enhle ngokwemvelo igcwele izinto eziningi ezithakazelisayo ongazibona kanye nemisebenzi okufanele uyenze uma uthambekele kakhulu, noma ungavele uhlehlele emuva futhi uphumule isikhathi sakho kude nale ndawo enhle. Kukhona ulwandle olukhulu, olude phambi kwethu phakathi nezinyanga zasebusika, cishe ngo-Okthoba kuya kuMeyi. Ehlobo ulwandle luvame ukukhukhuleka ngenxa yesizini, kodwa kunamabhishi amaningi amahle ngaphakathi kohambo lwemizuzu eyi-10 ukusuka endlini, neMatanchen Beach, elinye lamabhishi amade kakhulu endaweni anesihlabathi unyaka wonke. Imizuzu emi-5 ngemoto. Sicela uqaphele ngezinye izikhathi ngesikhathi sokuhlala kwakho kungase kube khona “amajene” noma amazeze esihlabathi, kanye nomiyane, nakuba kungase kube inkathazo ngezinye izikhathi bayingxenye ebalulekile yemvelo yethu yomhlume. Uma bekhona ngokuvamile kuba ingxenye yosuku kuphela, futhi ukusebenzisa izixosha kusebenza kahle kakhulu. Enye into okufanele uyiqaphele ukuthi leli yidolobha elincane laseMexico elinazo zonke izintelezi nezintelezi, futhi ngezikhathi ezithile kungase kube nokuphazamiseka kwenkonzo ye-inthanethi. Isevisi ivamise ukuba yinhle kakhulu kodwa ikakhulukazi ngesikhathi semvula ukucisha ngezikhathi ezithile kuyenzeka esingeke sikwazi ukubhekana nakho. Lesi isikhangiso sendawo jikelele, hhayi nje le ndlu ethize. Sicela ngomusa izivakashi zethu ukuthi zishiye ikhishi lihlanzekile ngaphandle kwezitsha ezingcolile kusinki nokuthi izihambeli zethu zithathe udoti ekhishini ziwuyise emgqonyeni omkhulu kadoti endaweni yokupaka.
Cishe sikumahora angu-2.5 enyakatho ye-Puerto Vallarta, imizuzu engu-20 ukusuka e-San Blas, futhi ngaphansi kwemizuzu emi-5 ukusuka e-Atikama.
Sinabaphathi ababili bendawo abakhulu, u-Jenny no-Manuel, abazoqinisekisa ukuthi ukuhlala kwakho kuhamba kahle ngangokunokwenzeka. Bazobe bekulindele lapho ufika, futhi bayatholakala kukho konke ukuhlala kwakho ukuze baphendule yonke imibuzo ongase ube nayo. Bajabule kakhulu ukukusiza ukuhlela noma yikuphi ukuvakasha noma imisebenzi ongase ube nentshisekelo kuyo, njengohambo lokubuka imikhomo, isifundo sokuntweza emanzini, noma ukubhucungwa okumangalisayo. Noma yini ongase uyidinge, la mantombazane akhona ukuze akusize wenze iholide lakho libe elikhumbulekayo.
Sinabaphathi ababili bendawo abakhulu, u-Jenny no-Manuel, abazoqinisekisa ukuthi ukuhlala kwakho kuhamba kahle ngangokunokwenzeka. Bazobe bekulindele lapho ufika, futhi bayatholaka…